Fampiharana 10 tsara indrindra ho an'ny fanatanjahan-tena - Top 2022
Fampiharana 10 tsara indrindra ho an'ny fanatanjahan-tena
Matetika rehefa manomboka manao fiofanana Mitady manam-pahaizana amin'ny faritra izahay hanampy anay hahatratra ny tanjonay. Liana amin'ny fomba fianarana izay manampy antsika hanatsara na hanova ny antsika isika fampiofanana ara-batana.
Noho ny fandrosoana ara-teknolojia vaovao dia manana ny findainao eo am-pelatananao ianao izao izay ahitanao fampiharana isan-karazany hanaovana fanazaran-tena ara-batana.
Tianay ny hampiasanao fanazaran-tena amin'ny fomba mora sy mavitrika ary mahazo aina. Noho izany, manome anao lisitra miaraka amin'ny 10 fampiharana tsara indrindra hanaovana fanatanjahan-tena. Ny safidy 10 rehetra dia misy amin'ny fitaovana Android sy iOS.
Manaraka izany dia ho fantatrao ny fampiharana malaza sy tsara indrindra amin'ny fanatanjahan-tena:
fiofanana amin'ny 7 minitra: Iray amin'ireo fampiharana 10 tsara indrindra hanaovana fanatanjahan-tena
Izy io dia fampiharana izay manome fitaovana ho anao manavesatra ary, ho setrin'izany, manatsara ny rafi-pandrefesanao amin'ny fampiharana anaerobika. Tena mety raha mikasa ny hitazona ny vatanao ho mavitrika isan'andro ianao.
Amin'ny fampiasana ny sehatra dia ho hitanao ny fihatsaran'ny fonao, ny taovam-pisefoana ary ny rafi-pitatitra. Ny fanazaran-tena dia hanampy anao hanentana ny flexibility, fandrindrana ary hampitombo ny mandoro kaloria.
Workout 7 minitra Manana vondrom-piarahamonina misy mpampiasa mihoatra ny telo tapitrisa izy io. Izy io dia nekena ho fampiharana malaza indrindra sy tsara indrindra Google Play mg 2016.
Ankehitriny ianao dia afaka miantehitra amin'ny tombony ho afaka fampiharana any an-trano. ny fanazaran-tena amin'ny faritra Malaza izy ireo noho ny fahombiazan'ny fanazaran-tena mahery vaika.
JEREO AO AMIN'NY GOOGLE PLAY VER SY APP STORE
Counter dingana - Pedometer, Counter Kalorie
Indraindray ny zava-misy manavesatra lasa fanamby lehibe izany. Na dia ny asa fanatanjahan-tena aza dia mety ho mandreraka, saingy ilaina izany raha te hanatsara ny fiainanao ianao.
Raha mifantoka amin'ny tanjonao ahenao ny habenao amin'ny Kaontera ny sarotra lasa mora. Ataovy ao an-tsaina fa mba hanatsarana ny vokatrao dia ilaina ny drafitry ny fihinanana voalanjalanja.
Manolotra anao mini-routine ny fiofanana nifantoka tamin'ny fanatsarana ny zava-bitanao isan'andro. Noho ny fiasany maro dia azonao atao ny manara-maso ny halavirana sy ny fotoana handehananao ary ny kaloria doranao.
Mba hanaraha-maso ny fandrosoanao sy hanamarihana ny tanjona tratrarina, azonao atao ny mitantana ny fampahalalanao isan-taona, isam-bolana, isan-kerinandro ary/na isan'andro. Tafiditra ao anatin'izany ny fanazaran-tena kely sy fampahatsiahivana ny fisotroana rano.
Fanaraha-maso ara-panatanjahantena: iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fanatanjahan-tena
Raha mitady fomba mampiala voly sy mahomby amin'ny fanatanjahan-tena ianao Sports Tracker ho an'ny fanatanjahan-tena rehetra miantoka anao ny fitaovana tsara indrindra hanaovana fanatanjahan-tena.
Ny fampiharana dia hampiseho anao sarintany hanombohana drafitra ny lalanao. Izy io no fampiharana tonga lafatra raha tadiavinao fanazaran-tongotra satria hanampy anao hanamafisana ny hozatrao izany.
Mamela anao hahita ny faritra tsara indrindra misy haavon'ny halavirana ho an'ny hazakazaka, fitsangatsanganana, bisikileta, ankoatry ny safidy hafa.
Ho fanampin'ny fitantanana ny fanazaran-tenanao sy ny asanao isan'andro, ity fampiharana ity dia manana rafitra naoty mba hahafahanao mandinika tsara ny vokatrao. Amin'izao fotoana izao dia ho fialamboly ny tanjona ho salama.
Izy io dia fampiharana manolotra fifanakalozana amin'ny tontolo iainana, mahatonga anao handao ny faritra mampionona anao ary hankafy ny eny ivelany.
El fiofanana ara-panatanjahantena izay hataonao amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia novolavolain'ny mpampiofana matihanina. Tokony hotadidinao fa ny vatana tsirairay dia samy hafa noho izany antony izany dia mety miovaova ny vokatra.
Na izany aza, ny interface dia ahafahanao mifehy ny fanazaran-tenanao ary mampifanaraka azy ireo amin'ny tanjonao. Amin'ny alàlan'ny horonan-tsary dia hahazo torolalana ianao hampitombo ny hamafin'ny fanazaran-tena.
Ny torolalana audiovisual dia mijery ny fanatanterahana tsara ny fanazaran-tena. LNy fampiharana dia misy amin'ny fitaovana iOS sy Android. Izany dia ahafahanao mizara ny vokatrao na ny fanamby napetraka amin'ny tambajotra sosialy.
Ny drafitry ny fanofanana dia mizara ho sokajy telo amin'ny fikarakarana vatana: abs, glutes, ary vatana manontolo. Azonao atao ny manangana: beginner, intermediate na advanced.
Mpanazatra fampiofanana Freeletics - Fitness amin'ny vatana
Afaka mandika ny kalitaon'ny sehatra misy anao izahay Google Play rehefa mandinika fa ny vondrom-piarahamonina misy azy dia ahitana atleta 11 tapitrisa. Hahazo ny torohevitra tsara indrindra ianao ary ho afaka hampifanaraka ny drafitry ny fiofananao.
Miankina amin'ny toe-batanao sy ny fitakianao amin'ny drafitry ny fanazaran-tena, ny tanjona dia azo tratrarina ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Misaotra an'i Freeletics Mpanazatra fiofanana Azo antoka ny fahombiazan'ny tanjonao.
Afaka manomboka amin'ny ambaratonga fototra ianao ka hahatratra ny avo indrindra. Marihina fa ny tsy mila lanja ny fanazaran-tena. Na izany aza, raha mitady ianao hampitombo ny hozatrao Manoro hevitra anao izahay hanao fanatanjahan-tena mampiditra lanja.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny antony tokony hampidiranao lanja amin'ny fanazaran-tena ianao na Ahoana no mampitombo ny hozatra jereo ny farany: Fanontaniana matetika.
Ny yoga dia fanao ara-batana izay manome tombony tsy misy farany. raha mitady ianao mampitony ny adin-tsainao ary tazomy ho salama amin'ny fomba mahafinaritra sy tony Pocket Yoga mety amin'ny tanjonao izany.
Afaka manangana fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny vatanao akaiky sy milamina indrindra ianao amin'ny alàlan'ny tsirairay fanatanjahan-tena. Mihena ny haavon'ny fanahianao isaky ny fiofanana mifoka rivotra. Ao anatin'izany ny fanazaran-tena ho an`ny tongotra sy ny kibo.
Pocket Yoga Manana fampahalalana amin'ny antsipiriany izy mba hanatanterahana tsara ny fanazaran-tena tsirairay. Tsy ho olana ny fihetsika samihafa hotanterahinao satria manana fanoharana mihoatra ny 200 ianao ho mpitari-dalana.
Ny sary tsirairay dia mamaritra ny tombontsoa azo avy amin'ny fanazaran-tena tsirairay. Manome toky anao izahay fa hanana fahafahana hahita fivoarana eo noho eo amin'ny fandrosoanao ianao raha manomboka fahazarana Pocket Yoga.
Raha te hanao fanatanjahan-tena ny faritra tsirairay amin'ny vatanao ianao manokana fotoana manokana ho an'ny hozatra tsirairay mba hahazoana vokatra tsara, ity fampiharana ity dia hanampy anao amin'izany. Fanazaran-trano manome anao ny tsara indrindra amin'ny teoria sy ny fampiharana.
El fiofanana ara-panatanjahantena mifantoka amin'ny sehatra toy ny: abs, sandry, vody, sns.. Tsy maintsy takatrao ny maha-zava-dehibe ny fampiasana ny faritra rehetra amin'ny vatanao. Amin'ny fahazoana fototra mafy orina dia afaka manao fanazaran-tena isika ary misoroka ny ratra.
Ohatra: rehefa manao squats miaraka amin'ny dumbbells isika dia mila hery ampy ny sandrintsika mba hahafahantsika mitondra izany lanjany izany. Noho izany dia zava-dehibe ny fampiofanana ny tapany ambony sy ny tapany ambany hatramin'izay miara-miasa ny tenantsika rehetra.
Azonao atao ny manamboatra ny fampahatsiahivanao, mampifanaraka drafitra amin'ny tanjonao, mahazo fanampiana ary mizara ny fandrosoanao amin'ny media sosialy. Afaka manao fanazaran-tena mafana ianao izao, mirakitra fanazaran-tena ary manara-maso ny lanjanao.
Keep - Mpanazatra Fitness ao an-trano
Fotoana hanatanterahana a Fanao fanazaran-tena izay manome vokatra tsara ho anao ary indrindra indrindra, vatana salama. Keep-Coach eIzy io dia fitaovana mifanaraka amin'ny tsironao sy ny tanjonao.
Ny rafitra fiasany dia misy lisitra misy hetsika mihoatra ny 60 mba hahafahanao manatanteraka azy ireo mandritra ny fanazaran-tenanao. Azonao atao ny mahazo antontan'isa momba ny halavirana, ny fotoana ary ny hafainganam-pandehany nandritra ny fotoananao fiofanana ara-batana.
Ny votoatin'ny mpitari-dalana azy ireo dia voarafitra tsara, manome anao mekanika audiovisual izay mora raisina sy azo takarina. Raha manolotra izany ianao dia manana fahafahana handrava ny firaketanao manokana.
Sit-ups afaka 30 andro
ABS Izy ireo angamba no vondrona hozatra sarotra indrindra hamolavola na sokitra. Nahoana? Satria izy ireo dia mirona hanangona ny tavy rehetra ao amin'ny vatana.
Tadidio fa tsy ampy ny fiofanana raha mitady abs nofinofy ianao. Ilaina ny mamorona sakafo voalanjalanja, ny sakafo dia misy fiantraikany amin'ny vokatrao amin'ny 50%.
Ampiasao fotsiny ny fanazaran-tena 15-20 minitra hanombohana fananganana ny abs. Tsy misy zava-miafina, na iza na iza dia afaka hahatratra izany raha mbola manao tsy tapaka ny fanazaran-tena ho an`ny kibo.
Noho izany, manoro hevitra ity fitaovana ity izahay mba hanatratrarana ny tanjona tiana. Ny drafitra fanazaran-tena dia ahitana ambaratonga maromaro manomboka amin'ny fahaverezan'ny tavy kibo na dia ny fanazaran-tena izay mampatanjaka azy ireo aza.
En Sit-ups afaka 30 andro hahita horonan-tsary izay hitarika anao amin'ny fomba mavitrika amin'ny fanazaran-tenanao tsirairay ianao mba ho azonao mamaritra ny faritry ny kibonao manontolo.
Tokony ho fantatrao fa ny hazakazaka dia manome tombontsoa ara-pahasalamana marobe. Ny hazakazaka no fomba mahomby indrindra manavesatra y hanamafisana ny fanoherana ny hozatra, ny ombilahy kely ary ny fitombenantsika.
Con Nike Run Club Hanana fahafahana hifehy ny rakitsoratra halaviranao manokana ianao mifototra amin'ny tanjonao manokana sy ny fanaonao manokana. Hita amin’ny hoditsika ny soa azo avy amin’ny hazakazaka, satria mihamazava sy madio ny endriny.
Ankoatr'izay, ny mpamorona ny fampiharana dia nahatakatra fa ny antony manosika dia zava-dehibe amin'ny fanatanjahan-tena. Noho izany, mamporisika anao izy ireo amin'ny alàlan'ny medaly, amboara virtoaly ary horonam-peo mandrisika rehefa manao ny lalao ianao fampiofanana.
Ny fampiharana Izy io dia mifanaraka amin'ny fitaovana finday Android sy iOS rehetra.
Nahoana isika no tokony hampiditra lanja amin'ny fanazaran-tenantsika raha te hampitombo ny hozatra?
El fanatanjahan-tena tsy misy lanja ampio ny hozatra hozarinao. Manampy anao hisoroka ny hozatry ny hozatra na ny ranomaso. Ankoatra izany, dia mamela anao hanomana sy hanomana ny hozatra vondrona izay ho vavolombelon'ny hery fanamby.
Tsy maintsy miofana amin'ny lanja ianao mba hanamaivanana ny hozatra. Rehefa eo ambany enta-mavesatra ny hozatra asa ara-batana, simba ny fibrany, rovitra ary manomboka miteraka ranomaso madinika.
Mamoaka molekiola ny fibre mba hanamboarana an'io "ratra" io ary hanangana indray ny fahasimbana. Vokatr'izany dia mitombo sy mihamatanjaka ny hozatry ny hozatra.
Noho izany dia ilaina ny mandray anjara sy mampitombo tsikelikely ny lanja amin'ny fiofanana. raha te hampitombo ny hozatra faobe.
Maninona no mametraka apps hanaovana fanatanjahantena?
Heverina ho fitaovana tena tsara izy io raha te hianatra na hanampy ianao fanazaran-tena vaovao amin'ny fanazaran-tenanao. Raha azonao atao ny mamantatra ny iray amin'ireo 10 fampiharana tsara indrindra hanaovana fanatanjahan-tena afaka mahazo fahazarana mahasalama ianao.
Raha mahavita mampitombo ny finiavanao ianao, dia ho tsapanao fa mpiara-miasa tsara ny fampiharana ary torolalana amin'ny fanatanjahan-tena.
Ny interface dia manana votoaty midadasika be fiofanana. Na izany aza, ny fampiharana dia tsy mahasolo ny traikefan'ny matihanina, fa tena manampy amin'ny maha-namana anao indraindray. fahazarana isan'andro.